Dawlada Shiinaha Oo Ballan Qaaday Inay Somaliya Ka Dhigto Dal Lagu Kalsoonaan Karo | Salaan Media
Dawlada Shiinaha Oo Ballan Qaaday Inay Somaliya Ka Dhigto Dal Lagu Kalsoonaan Karo
Nov 13, 2020 Muqdisho (SM) – Dowladda Shiinaha ayaa ku dhawaaqday in ay qorsheyno in ay si weyn u xoojiso xiriirka kala dhaxeeya Soomaaliya si ay uga baaqsato in uu ku cuslaado tartanka loogu jiro dalalka geeska Afrika oo loo arko kuwo muhiim ah.
“Shiinuhu wuxuu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo Soomaaliya sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka labada dal loona gaari lahaa heer sare”, ayuu yiri Wang Yi oo ah xubin ka tirsan Golaha Degaanka Shiinaha.
Wang ayaa hadalkaasi ka sheegay mar uu khadka taleefanka kula hadlay Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
Isagoo xusay in Soomaaliya ay tahay saaxiib wanaagsan oo lagu kalsoonaan karo, walaalna u tahay Shiinaha, Wang wuxuu sheegay in Soomaaliya ay xubin muhiim ah ka tahay Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika, Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Carabta iyo dhismaha wadajirka ah ee Hindisaha .
Wuxuu tilmaamay in Shiinaha uu diyaar u yahay inuu ka faa’iideysto fursadda sanad-guurada 60-aad ee xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal si loo hirgeliyo is afgaradkii ay gaareen hoggaamiyeyaasha labada dal iyo in lagu riixo xiriirka Shiinaha iyo Soomaaliya meel sare.
“Shiinaha ayaa ka mid ahaa dalalkii ugu horreeyay ee qiray madaxbannaanida Soomaaliya, Soomaaliyana waxay ahayd dalkii ugu horreeyay ee Bariga Afrika ee xiriir diblomaasiyadeed la sameeya Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha” ayuu yiri Wang